Ovy mamy (Vonona ao anatin'ny 30 Mins!) - Fomba Fanamboarana
salady maitso mangatsiaka misy amandy
inona no mandeha tsara amin'ny anana collard
tsy misy resipeo lasagna sôkôla vita amin'ny voanjo na endasina
inona no hatao amin'ny legioma faka natsatsika
mora mahandro laoka laoka pretzel avy amin'ny rangotra
Ny ovy mamy dia fomba tsy azo adinoina amin'ny fanaovana lovia miloko feno sakafo!
Kely kaloria misy tsiro malefaka malefaka, ity fomba fahandro mora ity dia mampiseho aminao ny fomba fahandro ovy mamy ary avy eo ampiasaina mandritra ny herinandro amin'ny fomba maro! Cubed na nopotsehina , nendasina, natsatsika, na koa namboarina manontolo , ny ovy mamy dia fomba iray matsiro hanitarana ny dolara ara-tsakafo!
Ovy mamy tonga lafatra
Araka izay tiantsika casserole ovy , Indraindray izahay dia tia an'io legioma tsotra io amin'ny alàlan'ny nandrahoina fotsiny sy namboarina.
Ny nandrahoina fa tsy ny fanendasana dia mitahiry fotoana fohy sy lafaoro.
inona no hotompoina amin'ny akoho bourbon
Ovy Mamy Ity no fomba fototra indrindra ahitana ovy , dibera , ary sira sy dipoavatra .
fiovana Vantany vao miomana izy ireo dia azo asiana tsaramaso na saosy isan-karazany. Ny syrup Maple, tantely, olon-kendry ary tarragon dia matetika ampiarahana amin'ny ovy, fa aza misalasala mamorona amin'ny zavatra rehetra an-tanana!
Izy ireo dia matsiro miaraka amin'ny dibera sy hafafin'ny siramamy volontsôkôla na zava-manitra pie paoma na voatavo pie .
Fomba fanamboarana ovy mamy
Ny ovy mamy dia mora be ary vonona amin'ny 1-2-3!
Mikosoka sy mandroroa ovy mamy ho cubes mitovy habe aminy.
Ataovy anaty rano mangatsiaka sy masira izy ireo ary ampangotrahina. Ny ovy mamy dia vita rehefa malemy ny fork.
Arotsaho, atao mash raha tiana ary manaova dibera, sira ary dipoavatra. Manompoa eo noho eo.
Ho an'ny microwave
Atsofohy ao anaty lovia azo antoka microwave na lovia casserole ny ovy cubed manta.
Manampia rano 1 ½ santimetatra ao anaty lovia ary sarony fonosana plastika. Poka ny fonosana plastika hahafahany mivoaka.
Mikraoba ambony eo amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 minitra eo ho eo na mandra-pahalemy azy ireo.
Esory am-pitandremana ny fonosana plastika, arotsaho ary arotsaka amin'ny dibera, sira ary dipoavatra.
TYPE PRO: Afangaroy ny ovy mamy ao anaty vilan-dranomandry ary apetaho iray na roa hampiana lasopy, lasopy, ary kasety mba hanampiana fofona kely sy sakafo mahavelona!
Ovy tiana indrindra
Ovy sy Apple Casserole - lovia lafatra fialantsasatra tonga lafatra
Ovy Mamy - singa 4 ihany
Pie ovy mamy - mora atao
Ovy nendasina - asio ditina mamy na mamy
Casserole ovy - kinova crockpot
Ianao ve nanao ireo Ovy mamy nandrahoina ireo? Aza hadino ny mamela isa na fanehoan-kevitra etsy ambany!
Fotoana fanomanana5 minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo25 minitra Fotoana manontolo30 minitra Fanompoana4 MpanoratraHolly Nilsson Ireto ovy mamy ireto dia tsotra, mamy ary mamy! pirinty Pin
▢rOA kilao ovy nikosoka
▢rOA tablespoons dibera
Voanjo peel ary atsaharo sakana 1 '.
Ataovy anaty rano masira mangatsiaka ny ovy ary ampangotrahina amin'ny hafanana be.
Andrahoy 18-20 minitra na mandra-pahavokarana rehefa voatsindroka amin'ny tsorakazo.
Apetraho ao anaty saringan ny ovy ary esory tsara.
Mipetaka raha ilaina ary afangaro amin'ny dibera, sira sy poivre mba hanandrana.
Ny ambiny dia azo tehirizina ao anaty fitoeram-pandeha mahamay ao anaty vata fampangatsiahana hatramin'ny 5 andro.
Kaloria:245,Karbohidraty:46h,Proteinina:4h,Tavy:6h,Tavy mahavoky:4h,Cholesterol:dimy ambin'ny fololevitra,Sodium:175levitra,Potasioma:764levitra,Fibre:7h,Sugar:9h,Vitamina A:32351IU,Vitamina C:5levitra,Kalsioma:68levitra,Vy:iraylevitra
rotel mac sy fromazy misy velveeta
Teny lakileOvy mamy mahandro tsara indrindra, Ovy mamy andrahoina, fomba fahandro ovy mangotraka, fomba fanaovana ovy mamy Mazava ho azySakafo an-daniny masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .